I-LinuxCapable-UMthombo wakho we-GNU/Linux Howtos onobubele
IArch Linux isekelwe
Ushicilelo lweLinux Mint Debian
IL Rocky Linux
Uyifaka njani i-HPLIP ku-Ubuntu 22.04 LTS
Ipapashwe ngo: Lwesihlanu, ngoMeyi 20, 2022
Iprojekthi ye-HPLIP yasungulwa yi-HP inc. ijonge ukwenza kube lula kubalawuli beenkqubo kunye nabasebenzisi benkqubo yeLinux ene…
Uyifaka njani i-Plex Media Server kwiArch Linux
I-Plex Media Server yisoftware yokugcina yonke imixholo yemidiya yedijithali kwaye ufikelele kuyo ngesicelo somthengi esifana neTV yakho, iNVIDIA Shield, ...
Uyifaka njani iPostgreSQL kwi-Ubuntu 22.04 LTS
I-PostgreSQL yinkqubo yolawulo lwedatha ezinzileyo kwaye ethembekileyo esetyenziswe ngaphezu kweminyaka engama-20. Ixhaswa luluntu olusebenzayo…
Uyifaka njani iMariaDB kwi-Ubuntu 22.04 LTS
Igqityelwe ukuvuselelwa ngolwesihlanu, nge-20 kaMeyi, ngo-2022
I-MariaDB yenye yezona ndawo zidumileyo zemithombo yolwazi evulekileyo ecaleni komsunguli wayo iMySQL. Abadali bokuqala beMySQL baphuhlise uMariaDB ekuphenduleni uloyiko lokuba iMySQL iya kuba yinkonzo ehlawulweyo ngequbuliso ...
Uyifaka njani iKhowudi yeVisual Studio kwi-LMDE 5 "Elsie"
Ikhowudi yeSitudiyo esiBonakalayo sisimahla kwaye sinamandla somhleli wekhowudi yemithombo eyenziwe nguMicrosoft yeWindows, Linux, kunye neMacOS. I-VSCode ibonelela ngezinto ezininzi ezinje ngenkxaso…
Uyifaka njani i-PowerShell kwi-LMDE 5 "Elsie"
IMicrosoft PowerShell lulwimi olubhalwayo olusebenza ngeendlela ezininzi nolukhokelayo kushishino olunokusetyenziselwa ukuzenzela. Ihlala idityaniswa nobunye ubuchwephesha obunje ngeCI/CD…
Uyifaka njani i-VSCodium kwi-LMDE 5 "Elsie"
I-VSCodium yifolokhwe yoMhleli weKhowudi yeSitudiyo esiBonakalayo kaMicrosoft elungisiwe ukuba ube nofikelelo olupheleleyo kumthombo ovulekileyo. Ikhowudi yemvelaphi yale mveliso inokufumaneka ...
Usifaka njani isikhangeli seOpera kwiLMDE 5 “Elsie”
I-Opera sisikhangeli sewebhu sasimahla, esinqamlezayo esiphuhliswe yiOpera Software kwaye sisebenza njengesikhangeli esekwe kwiChromium. I-Opera ibonelela ngesikhangeli sewebhu esicocekileyo, sanamhlanje esi...
Uyifaka njani iXanMod Kernel kwiPop!_OS 22.04 LTS
I-XanMod yinto ekhululekileyo, evulelekileyo-yenjongo jikelele yeLinux Kernel enye indawo kwikernel yesitokhwe ngePop!_OS 22.04 LTS. Ifaka iisetingi zesiko kunye neempawu ezintsha kwaye ...
Uyifaka njani i-GIT kwi-Fedora 36 Linux
I-GIT yinkqubo yolawulo yasimahla nevulelekileyo enokulawula ngokufanelekileyo iiprojekthi ezincinci okanye ezinkulu. Ivumela abaphuhlisi abaninzi ukuba basebenze kunye ...
Uyifaka njani iRedis kwiFedora 36 Linux
I-Redis ngumthombo ovulekileyo (ilayisensi ye-BSD), kwi-memory key-value data structure store esetyenziswa njengesiseko sedatha, i-cache, kunye nomthengisi womyalezo. IRedis ixhasa ulwakhiwo lwedatha olunje ngeentambo, iihashes, uluhlu, iiseti, zihlelwe ...
Uyifaka njani iApache ngeModSecurity kwi-Ubuntu 22.04 LTS
I-ModSecurity, edla ngokubizwa ngokuba yi-Modsec, sisicelo sasimahla sewebhu somlilo (WAF). I-ModSecurity yenziwe njengemodyuli yeApache HTTP Umncedisi. Nangona kunjalo, ukusukela kwiintsuku zayo zokuqala,…
Page1 Page2 ... Page80 Okulandelayo →
© 2021 - 2022 LinuxAwanakho onke amalungelo agciniwe.
Zonke iilogo, iimpawu zokuthengisa kunye neempawu zorhwebo ezibhalisiweyo ziyipropathi yabanini bazo.
Le website yenzelwe iinjongo zemfundo kuphela. Akukho siqinisekiso okanye imbuyekezo enikiweyo kuyo nayiphi na ilahleko yedatha okanye ihardware.